Unodoli 4ever kunye noNodoli ngoNaphakade-Oyena Doli we-Sex owahlukileyo oGqibela kwiVenkile
U-Edith Leona Ubomvu Oonodoli beNwele ezinde njengeSex TPE F-Cup Firm Ass 155CM Dollforever S Shape
UAlice-Doll4ever 165CM EVO Skeleton TPE yokwenene yesondo
Ukuthozama - 145CM Doll4ever TPE sex Doll
U-Elina-155cm omtsha we-EVO Skeleton TPE sex Doll
UCandice-EVO Skeleton 145CM Umzimba oLungekileyo woNodoli4ever TPE weSondo
Olona phawu loDoll4ever Wothando lweDoll-TPE Oonodoli bokwenyani eParadesi
KuDoll4ever, eyona nto ibalulekileyo kukubonelela abathengi ngonodoli olungileyo ngenene wesondo. Unodoli Iqela linamandla amakhulu okuyila, ukuphuhlisa nokuvelisa unodoli wothando lokwenyani. Jonga oonodoli bezesondo bothando abenziwe nguDoll4Ever. Ulusu olumangalisayo lwenyani olugudileyo, isakhelo sentsimbi esichazwe ngokupheleleyo. I-Doll4ever Brand yenye yezona zinto zibalaseleyo ezenziwe ngonodoli besini.
Ibhanti: Unodoli ngoNaphakade
Izinto: Iidoll zesini ze-TPE Isitayela: Oonodoli bezesondo baseMelika, oonodoli beSitayile saseYurophu, oonodoli beSitayile saseAsia, oonodoli beSini bePetite, ooNodoli beSini beTorso njalo njalo.
Intshayelelo: Unodoli ngoNaphakade -Oonodoli abahle - Unodoli owahlukileyo - unodoli wothando lokwenyani
I-Doll ye-4ever ye-Sex Doll Brand-i-TPE umenzi woonodoli wesini, izinto ze-TPE azikho ivumba elikhethekileyo. Kumnandi kakhulu ukuchitha ixesha kunye Doll4ever onodoli. Unodoli4Ever TPE iidoli ezintandathu zigqwesile kwiipropathi ezibonakalayo, ezibambekayo kunye nezinto eziphathekayo, ziqinisekisa ukuba unokusebenza ngokulula nangokutyibilikayo.
✔️ Eyona Khetho ilungileyo ✔️ Ukuhanjiswa kweHlabathi liphela
+ I-TPE yanyanga zonke: Ukwenziwa kwefomula yemathiriyeli ekrwada, ngomlinganiselo omncinci (ubunzima bungaphantsi kunangaphambili), ukungeneka okuqinileyo, ngaphandle kwevumba elingaqhelekanga, isivuno esiphantsi se-oyile kunye nokuziva ngcono kokuchukumisa.
+ I-EVO yoguqulelo lwamathambo aphuculweyo: Amathambo angakumbi, asengqiqweni ngakumbi, ngakumbi Ukulinganisa, ukusebenza ngokulula, unokuqonda ngokugqibeleleyo izijekulo zokuguqa, i-squat yase-asiya, intende yesandla ibambe isilevu, yenza amagxa kwaye ubambe isifuba, njl. njl. Okwangoku sebenzisa iindawo ezininzi ze-aluminium. ukufezekisa ubunzima obulula.
+ IiWigs zenziwe ngokohlobo ngalunye lukanodoli wesini, olufaneleke ngakumbi, olulunge ngakumbi kubalinganiswa babo, lukwanokhetho oluninzi.
+ Ukupakisha kunengqiqo ngakumbi kwaye kukhuselekile, wonke unodoli wesini usebenzisa igwebu lenkumbulo kwiphakheji, kunye nengubo emhlophe ezinikeleyo yokugquma umzimba wonke, okwangoku, umlinganiselo wokupakisha uncinci ukuthuthwa nokuqokelelwa lula.
+ I-Oral, i-vagina kunye ne-anus channel yahlulwe ngokupheleleyo kunye ne-skeleton yangaphakathi, ecocekileyo, i-antirust kwaye ikhuselekile.
+ Itekhnoloji yokwenza amabele angenamgongxo ihambele phambili, indawo enomngxunya esengqiqweni ngakumbi ngaphandle kokubeka okwesibini, ukubamba nyani kunye nobunzima obulula.
+ Ubume bangaphakathi be-Vagina bohlukene, ukhetho oluninzi kunye namava okwenene, imibala ephindwe kabini ngaphakathi kubandakanya ukukhanya okukhanyayo kunye nokukhawuleza emva kwenkqubo emininzi.
+ Zombini intloko kunye nomzimba zisetyenziswa ubuchule bokuprinta be-3D, ukwenza iindleko zokuhlola zibe phantsi kunye nokusebenza okuphezulu.
+ Zonke izinto ezisetyenziswayo ezibandakanya izinto zokuthambisa ezinenqanaba eliphezulu kunye nokhuseleko, ezinye iifektri ezisetyenziselwa izinto zoshishino, ezinukayo nezingakhuselekanga.
+ Unodoli we-Doll4ever akanamthungo entanyeni enentloko, eqinile ngokupheleleyo kunye nenyani.